Amin'izao fotoana izao, be dia be ny olona te-hihena matavy, hampihena lanja ary hanana fiainana tsara kokoa. Manao ny zava-drehetra izy ireo mba hahazoana ilay nofinofy abs pack enina. Fa po manana abs six pack, ilaina ny manaraka fahazarana ara-pahasalamana toy ny fihinanana sakafo tsara, ny tsy fandalovana sakafo ary ny fanatanjahan-tena tsy tapaka.
Jereo ny fomba hahazoana kibo fisaka ao anatin'ny fotoana fohy!
Ahoana ny fananana abs six pack?
Samy te hanana abs six pack ny rehetra. Amin'ny fotoana antomotra ny fotoam-pahavaratra na ny fotoam-pialan-tsasatra dia matetika ny olona no mampiasa fomba isan-karazany mba hahazoana kibo tsara ombelahin-tongony.
Na izany aza, mba hananana six pack abs dia ilaina ny fiovana sasany amin'ny fahazarana. Fa ny tena zava-dehibe amin'ny fananana abs six pack dia ny fanazaran-tena ara-batana mba hampihenana ny tavy.
Tena ilaina ny fananana lanja araka ny tokony ho izy, ka ny fanazaran-tena toy ny sit-up dia manampy amin'ny fisehoan'ny hozatra ao amin'ny faritry ny kibo.
Fanirian’ny vehivavy maro ny manana abs six pack. Fantatry ny rehetra fa zava-dehibe ny fanatontosana io tanjona io. Fa ny iray tsy afaka manadino lafin-javatra iray hafa izay manampy amin'ny fampandrosoana ny enina fonosana abs, sakafo.
Ny fanarahana ny sakafo voalanjalanja dia tena ilaina mba hampihenana ny lanjany, ary vokatr'izany dia mahazo abs six pack. Ny sakafo tsara miaraka amin'ny hetsika ara-batana dia hanampy amin'ny fanafoanana ny tavy ao amin'ny faritry ny kibo, ka mamela azy ireo ho voafaritra kokoa.
Rehefa manao fanatanjahan-tena dia miezaha manao fanazaran-tena aerôbika mba hanafoanana ny tavy miangona ao amin`ny faritry ny kibo.
Vakio ihany koa: Kibo ratsy!
Vakio ihany koa: Dite hahavery kibo!
Vakio ihany koa: Ahoana no manify ny andilany?
Ny lehilahy rehetra dia te-hiseho amin'ny endriny tsara, indrindra fa ny six pack abs. Saingy mba hahazoana kibo salama dia mila mihinana sakafo mahasalama ianao.
Tena ilaina ihany koa ny fanazaran-tena amin'ny fanofanana lanja sy ny aerobic. Ny hetsika aerôbika dia hanampy anao handoro tavy, fa ny fampiofanana lanja kosa dia hanampy anao hanorina matavy.
Aorian'ny fahaverezan'ny tavy dia ampiharo ny hozatry ny kibonao miaraka amin'ny andiana fiofanana samihafa, manaja ny fiatoana eo anelanelan'ny fanazaran-tena.
Six pack abs ao anatin'ny herinandro
Ny fampivoarana ny enina fonosana abs ao anatin'ny herinandro, amin'ny kibo misy tavy be loatra, dia tena sarotra, saingy azo atao ny mahita vokatra sasany izay hiafara amin'ny kibo nofinofy.
Noho izany dia ilaina, ankoatra ny fanatanjahan-tena tsy tapaka, ny fihinanana sakafo be proteinina. Izany dia hamela ny hozatra hivoatra, ankoatra ny fandoroana tavy noho ny fiantraikan'ny thermogenic hita ao amin'ny proteinina.
Mila misotro rano betsaka ianao satria tena ilaina ny manadio ny vatana ary misoroka ny fihazonana ranon-javatra. Tsara kokoa ny ranomandry, satria manana fiantraikany thermogenic, izany hoe, manafaingana ny metabolism, mandoro tavy.
Famahanana mba hanana abs enina fonosana
Araka ny fikarohana sasany, ny sakafo dia tompon'andraikitra amin'ny 80% amin'ny fizotran'ny kibo mahasalama. Ho an'ireo izay te hanana abs enina fonosana dia mila mampiasa vola amin'ny sakafo be fibre ianao, satria izy ireo dia manampy amin'ny fampandehanana tsara ny tsinay, mifehy ny haavon'ny glucose. Ireo lafiny rehetra ireo dia zava-dehibe mba hampihenana ny tavin-kibo.
Ilaina ny miala amin'ny sakafo be gliosida tsotra na voadio toy ny vary fotsy, mofo, paty, zava-mamy, voamadinika, tantely, sns. Ampiasao amin'ny sakafo be gliosida be pitsiny toy ny vary mena, ovy, ovy, oats, voanjo, voa, betiravy, kale, tsaramaso, sns.
Fanararaotana voankazo, legioma ary legioma.
Voalohany dia ilaina ny manao fanazaran-tena izay manenina ny hozatry ny kibo, ary avy eo dia mamaritra azy ireo. Anisan'ireo fanazaran-tena aroso indrindra dia:
Kibo misy baolina;
Miakatra sy midina tohatra;
Betsaka ny fanazaran-tena manampy amin'ny fanatontosana abs enina toy ny lomano, jogging ary fanazaran-tena hafa. Ankoatra izany, ny dihy koa dia mpiara-miasa matanjaka amin'ny fivoaran'ny hozatry ny kibo.
Hafiriana vao mahazo abs six pack?
Ny fotoana ilaina amin'ny fananana six pack abs dia miankina amin'ny fanoloran-tenan'ny olona tsirairay. Rehefa avy nanao fahazarana ara-pahasalamana toy ny fanarahana ny sakafo voalanjalanja sy ny fanazaran-tena tsy tapaka, dia tsy ela ny vokany.
Tsara ny mitadidy fa misy olona manana fotoana mora kokoa amin'ny fampivelarana hozatra. Amin'ny ankapobeny, manomboka hita ny vokatra manomboka amin'ny volana voalohany.
Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy hahazoana abs six pack haingana:
Aza adino ny sakafo!
Ataovy fahazarana ny mihinana isaky ny sakafo, indrindra ny sakafo maraina. Ary misakafo amin'ny antonony, indrindra amin'ny alina.
Mety hisy fiantraikany amin’ny hormonina ao amin’ny vatantsika izany rehefa kely torimaso. Mety hanasarotra ny fampihenana lanja izany. Tena ilaina ny matory adiny 8 isan'andro.
Adino ny indostrialy!
Mba hampihenana lanja sy hanana abs enina fonosana dia mila miala amin'ny sakafo indostrialy ianao, indrindra ny zava-pisotro malefaka.
Lazao hoe tsia ny sakafo haingana!
Ireo sakafo ireo dia tena kalôria, ary ankoatra ny matavy dia manimba ny fahasalamana amin'ny ankapobeny.
Tags:kibo fisakaComo perder gordura kibomampihena